Shiinaha Alxanka Custom Alxanka Ahama Steel Alxanka Manufacturer Sheet Qaybo Birta Alxanka Laga soo bilaabo ISO 9001 Soosaarayaasha Warshad Shahaadaysan iyo shirkado | THYH
Alxanka Custom Waayo ahama Steel Alxanka Manufacturer Sheet Qaybo Birta Alxanka Laga soo bilaabo ISO 9001 Factory Shahaadada
Adeegyada Alxanka ee Birta Fudud, Birta ahama iyo Aluminium
Waxaan fulinaa 3 nooc oo waaweyn oo ah qaababka alxanka taas oo kuxiran nooca birta loo baahan yahay. Waxaan ku siin karnaa talo ku saabsan waxyaabaha ugu fiican iyo habka alxanka ee shuruudahaaga.
TIG waxay u taagan tahay alxanka gaaska Tungsten Inert, waana mid ka mid ah hababka ugu isticmaalka badan. Si kastaba ha noqotee, dhab ahaantii waxay u baahan tahay khibrada ugu badan, oo kooxdeena ku takhasusay. TIG alxanka ayaa ah mid aad u kala duwan oo si aad ah waxtar u leh marka ay fuliso gacan khabiir ah. Inta badan mashaariicda waaweyni waxay shaqaalayn doonaan habka TIG.
MIG wuxuu u taagan yahay alxanka Gaaska birta waana wax aad u adag in la fuliyo. Habka loo yaqaan 'MIG' wuxuu ku lug leeyahay silig khafiif ah oo lagu quudinayo aaladda alxanka, sida loogu quudiyo, waxaa loo kululeeyaa jidka. Habkan aadka u jilicsan ayaa badanaa la doortaa marka lala shaqeynayo biraha khafiifka ah. Adeegyadayada alxanka waxaa ka mid ah MIG alxanka iyo sidoo kale ARC iyo TIG.
ARC alxanka: Ku isticmaal biraha khafiifka ah iyo marka biraha qaro weyn iyo walxaha loo yeero.
Dhammaystirka Waxaan ka dhamayn karnaa alxanka mashiinka qashin qubka ah, muraayadda muraayadda oo loo diyaariyo dahaadhka budada
1. Ma waxaad tahay warshad ama shirkad ganacsi?
Waxaan nahay warshad gaar ah.
2: intee in leeg ayey tahay waqtiga dhalmadaadu?
Waqtigeenna umulintu guud ahaan waa 10 illaa 25 maalmood, ama hadba tirada.
3: ka waran shuruudaha lacag bixinta?
30% T / T ka hor, dheelitirka ka hor rarka.
Waxaan bixinaa sawirka, fiidiyowga ama xitaa Qeybta Saddexaad si aan u hubino.
4: Miyaad siisaa shaybaarro? Muddo intee leeg ayaan helayaa shaybaarkaaga?
Haa, muunad bilaash ah ayaa la heli karaa. Waxay kuxirantahay maadada iyo naqshadeynta, 5 ilaa 7 maalmood.
5. Maxay yihiin wax soo saarkaaga ugu muhiimsan?
Adeeggeenna been-abuurka ah ee soo socda.
Fabric been abuur been ah
Shaabad bir ah / alxamid / feer CNC / goynta laser
Parts qaybo bir ah
Metal been abuur culus.
Meelo kale oo bir ah oo la qaabeeyey
6. Sideed ku xaqiijin kartaa xakamaynta tayada?
100% kormeerka tayada kahor baakadka, boqolkiiba pass waa in kabadan 99.5%
Hore: Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedka Qaab-dhismeedka Birta ee Adeegga CNC
Xiga: OEM / ODM Sheet Birta Daabacaadda / sheet sax sax sheet / Adeeg Jarida laser
Qaybo ka alxanka Birta Custom
Qaybo ka Alxanka Birta culus
Qaybaha Alxanka Birta
Qaybo ka alxanka alxanka
Qaybo ka alxanka
OEM Alxanka Hot liqay galvanized Birta Fabrica ...
Waxyaabaha Q235, ahama, Aluminium, SPCC, Copper, Brass, SGCC, SECC, Bronze, Carbon Steel, Corten steel .ect Thickness 0.2-30mm Colorfull Color, Red, Green, Silvery, Sliver, Silver White, Silvery Black, Silver grey , Midab, Dahab, Cadaan, Madow Guduud .ect Brand Custom Processing, LaserCutting, Laending, Stamping, DeepDrawing, CNC machining, Turning, Drilling, Tip, Riveting, alxanka, Daaweynta dusha, Isu uruurinta Daaweynta Daaweynta Dusha sare, rinjiyeynta, galv. ..